Google Earth ဖြင့်လမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ Martech Zone
Google Earth ဖြင့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ
စနေနေ့, မတ်လ 17, 2007 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
အဆိုပါ Indianapolis ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်း Gene & Marilyn Glick ၏အမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီမြို့ပြဆိုင်ကယ်နှင့်လူသွားလူတန်းစားများ၊ ရပ်ကွက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခရိုင်များနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအဆင်ပြေမှုများကိုဆက်သွယ်ပေးပြီးအလယ်ပိုင်း Indiana ပြည်နယ်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးစနစ်တစ်ခုလုံးအတွက်မြို့တွင်းအချက်အချာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးကောင်းသည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Pat Coyle နှင့်စကားပြောရာတွင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းကိုမြေပုံဆွဲ။ ဂူဂဲလ်မြေပုံပေါ်တွင်ထားခြင်းကရှေးရှေးလူများမှတဆင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်မည် Google Earth ကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်မြေပုံအတွက်လမ်းတည်ဆောက်ခြင်းသည်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သော်လည်း Google Earth နှင့်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျ Path ကို tool ကိုသုံးနိုင်သည်
လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်။ path tool ကို နှိပ်၍ သင်၏လမ်းကြောင်းစတင်နှင့်အဆုံးသတ်မည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ။ မျဉ်းကြောင်းဆွဲလိမ့်မည် ပြီးနောက်ကလစ်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ် ဦး mid-point ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည် (ctrl-click သည်အမှတ်တစ်ခုကိုဖျက်ပစ်သည်) သို့သော်သင်မြေပုံပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဘေးဘားရှိသင်၏အလွှာပေါ်တွင်သင် right-click လုပ်ပါကသင်သည်ဖော်ပြချက်များကိုထည့်နိုင်သည်၊ သင့် layer ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အမြင့်ကိုပင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Google Earth ဖြင့်ရှုခင်းကိုစောင်း။ အခြားအလွှာတစ်ချောင်းကိုဖွင့် / ပိတ်နိုင်သည်။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှကိရိယာများသည်သင့်အားချဲ့ရန်၊ စောင်းရန်၊ သင့်အမြင်ကိုပြောင်းလဲရန်၊ အလှည့်ပြောင်းရန်နှင့်အမြင့်ကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ လျှောက်လွှာ၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အလွန်အလိုလိုသိ!
ဒီဇင်ဘာလတွင် ဂူဂဲလ်မြေပုံများသည်သူတို့၏ API တွင် KML အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ် သင်၏အလွှာများကို KML ဖိုင်တစ်ခုအနေဖြင့်ထုတ်ပြီးဂူဂဲလ်မြေပုံဖြင့်ညွှန်ပြပါ.
ထို့အပြင်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်သင်၏အလွှာများကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတင်ပို့နိုင်သည်။ ဒါကိုငါမလုပ်သေးပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ် ဤစီမံကိန်း၏ပထမပိုင်းသည်လမ်းကြောင်းဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လှည့်ကွက်တစ်ခု - ငါ Cultural Trail ရဲ့ပုံကိုဖွင့်ပြီးအဲဒါကို Google Earth ထဲကိုတင်လိုက်တယ်။ ငါက ၃၀ ရာနှုန်းလောက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်သတ်မှတ်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြေပုံရေးဆွဲဖို့ gauge အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤစီမံကိန်း၏နောက်အပိုင်းတစ်ခုသည်အချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများပေါ်ရှိ mouseovers များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်မြေပုံကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ သိပ်ကောင်းတဲ့အရာပဲ!
၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပင်“ လူအစုအဝေး၏ဉာဏ်ပညာ” လော။
မတ်လ 19, 2007 မှာ 1: 23 pm တွင်
ဒါကတကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နည်းပညာပါ။ Mapquest သည်ဂြိုဟ်တုဆိုင်ရာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုမြေပုံများတွင်မချထားပါ။
မတ်လ 19, 2007 မှာ 2: 14 pm တွင်
Directions သည်မကြာသေးမီက Google Maps API ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Google Earth မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောပြင်ပဖိုင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လမ်းကြောင်းကိုအမြင့်ဆုံး (2+ မှတ်) သည်အနည်းငယ် ပိုမို၍ ခက်ခဲသည်။ ကောင်းစွာကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းထွက်အဲဒီမှာအချို့ရောင်းချသူရှိပါတယ် လမ်းကြောင်းများ သို့သော်လည်းငါသည်မည်သည့် API သို့မဟုတ်ဆော့ဝဲလ်ကို Service implementations အဖြစ်မမြင်ခဲ့ပါ။
မတ်လ 31, 2007 မှာ 8: 16 AM
Doug ဒါတော်တော်အေးတယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတွက်ဆဖို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမထိုင်ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေကအဆုံးမဲ့ဖြစ်ပုံရတယ်။ ဂူးဂဲလ်မြေပုံများကိုဖောက်သည်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဂူဂဲလ်မြေပုံများကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
မတ်လ 31, 2007 မှာ 8: 27 AM
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်စရာကောင်းနေတုန်းပဲ။ ငါရှာဖွေရေး add, 'self-service' marker system ကို set up, လမ်းကြောင်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များ abunch နိုင်ဘူး။ ထွက်ခွာသည် လိပ်စာ fix အခြားဥပမာတစ်ခုအဘို့။ ယခုအပတ်တွင်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသောမြေပုံရေးဆွဲရန်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
BTW - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော site နှင့်သင့်အားတွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ Indy ရှိကျွမ်းကျင်သောကွန်ယက်များရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရောနှော၌သင်တို့ကိုရရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်!
မတ်လ 31, 2007 မှာ 10: 52 AM
ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုသူငယ်ချင်း Ade မှကျွန်ုပ်သိသည်။ ငါကဲ့သို့သောအခြားသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလွန်အေးသည်
နောက်တစ်နေ့မှာဂူဂဲလ် MAP API ကိုဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုထဲထည့်ရန် GMap EZ, စူပါရိုးရှင်းသော drop-in script ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ http://www.n-vent.com/googlemaptest
က Nicholas Hoza
မေလ 31, 2009 မှာ 5: 52 AM
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Google Earth သည်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသည်။ သင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးသောအခါ၎င်း၏အရှည်ကိုတိုင်းတာရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမရှိပါ။
ကံကောင်းတာက၊ ကျွန်တော်ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ။ အကယ်၍ သင်သည်လမ်းကြောင်းကို .kmz ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ်သိမ်းဆည်းပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ တင်၍ ၎င်းသည်သင်လမ်းကြောင်း၏အရှည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ဒီမှာလင့်ခ်ပါ။
ဇွန် 4, 2009 မှာ 4: 59 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏တင်ပို့မှုအခွေသည်ပျက်နေကြောင်းသိရှိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ .kmz လမ်းကြောင်းဖိုင်များသို့မဟုတ် .kml လမ်းကြောင်းဖိုင်များကိုသင်ယခု upload ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့နောက်တစ်ခါဒီမှာ Google Earth လမ်းကြောင်းအရှည်ကိုရှာရန် link တစ်ခုဖြစ်သည်။